China Concertina Wire fekita uye Vagadziri | Hangtong
Concertina waya inopihwa kazhinji kazhinji mune imwe chete coils kana yakayambuka spiral coils. Isu tinokwanisa kuburitsa razor Type barbed waya mu concertina coils kana mitsetse yakatwasuka. Mhando dzeblade uye yakatarwa inosiyana zvichienderana nezvinodiwa nevatengi.
Adopt yakakwira yakadzika low low carbon simbi inopisa yakanyurwa waya, inopisa yakamurwa simbi, kana waya yemarara, mundiro yemarara isina chinhu,
zinc uremu uye SS giredhi inogona kusarudzwa.
Tsika Yepasiripo yekurapa: Kupisa kwakanyikwa kwakadzika, Powder yakadururwa,
Nyowani yakagadziriswa kurapwa kwepasi: electrophoretic pendi yakavezwa waya. Kugadzira ngura pane yekucheka chikamu .Zvakagadzirwa izvi isu patent (No.ZL 2012 2 0274870.4)
Kuita uye hunhu: hupfumi, hwakasimba uye hwakanaka kwazvo kana hwawedzerwa.
Razor Wire Mobile Obstacle Barriers / Mauto Shandisa Concertina Wire:
Concertina waya kana yakadamburwa razor waya ine maviri maitiro akakodzera kushandiswa kwemauto. Kutanga, inokurumidza uye nyore nyore kumisikidzwa seyekuvhara kwechengetedzo yemahara. Kukurumidza uye nguva yakakosha muhondo kana kushandiswa kwemauto. Varume vatatu chete ndivo vanofanirwa kumiswa nekudzoswa kwemahara waya zvipinganidzo, mafeni, kuchengetedza kwemidziyo yevanhu.
Chechipiri, razor wire barriers haivimbi chero mehendi simba, magetsi, bhatiri, mota, kana injini. Inoumba chipinganidzo chinoshanda kuti chidzivirire matambudziko emuchina anokonzerwa nekutadza kwemishini, kushomeka kwebhetri, kukundikana kwemagetsi, kana injini kukundikana.
Razor Wire Vakakurumbira vachishandisa mukuchengetedza kuchengetedza, kuvharirwa kwemajeri, mafironi nekudzivirira kwekuchengetedza.
Kutanga sarudza Bordering fenzi, yakaderera mutengo, uye nyore kuisa.
Ruzivo rweMubhadharo rwakakurumbira: T / T 30% pamberi senge dhipoziti, chiyero chinopesana chakagamuchira kopi yeB / L.
Yapfuura: Kudzivirira Kudzivirirwa
Inotevera: Waya yomunzwa